SEO Yakafa | Martech Zone
Chishanu, April 6, 2012 Chishanu, May 13, 2016 Douglas Karr
SEO yakafa sekuziva kwedu. Iwo ekare masvomhu ekuwedzera backlinks uye yekuzadza mazwi akakosha ikozvino tarisiro yeGoogle kuti utore yako saiti uye uvige mumhedzisiro yekutsvaga. SEO haisisiri dambudziko remasvomhu, ndere munhu. Zvemagariro zviratidzo zviri kuve kiyi yekumisikidza uye yekubatanidza algorithms ari kusiyiwa basa. Yasvika nguva yekuti iwe uone chokwadi nezve SEO… uye gadzirisa zvinoenderana.
Ehe isu takashandisa yakanaka baity zita rekukwezva kumwe kutarisisa, asi inguva iyoyo mumwe munhu akasimuka akataura izvozvo. Chinyakare SEO haichisiri mhinduro inoshanda kumabhizimusi ekudyara mari mukati. Chokwadi - vanhu vachiri kushandisa injini dzekutsvaga… uye isu tichiri kuona kuti vatengi vedu vari pamapuratifomu akasimba, anokurumidza ayo anounza zvemukati zvadzo zvakanaka kunongedzera. Asi isu hatichisiri kushandisa nzira dzekare dzekuyedza kufunga kuti ungasvina sei mumazwi kana kuwana backlinks neimwe nzira inodiwa.
Ichokwadi, nyowani SEO package inoenda kupfuura nzvimbo saiti optimization uye link building uye inosanganisa ongororo yekutendeuka kuona mazwi akakosha, kunyora zvinomanikidza zvemukati, zvichiita kuti zvive nyore kuti vaverengi vagovane izvo zvirimo, vachishandisa hukama hweveruzhinji kubatana kuti vawane mikana yekugovana izvo zvemukati, nekusimudzira kuburitsa mune izvo zvirimo.
Iyi mharidzo yakatanga yakatsigirwa uye yakaratidzwa kuburikidza newebhu webhu ne Kuwedzera. Nhasi yakaiswa papeji rekutanga re Slideshare!
UPDATE 10/4/2012: Google yakagadzirisa marongero ayo eWebmasters uye zvakanyanya kunongedzera zvirongwa zvekubatanidza uye kukurudzira hapana zvinotevera kune ese maumboni akabhadharwa.
Tags: backlinkingkeyword kuwandakushandiswa kweshokomazwi akadzamaitsva seochikwiriroTsvaga Kutengesaseo yakafakushambadzira kwevanhukusimudzira munharaundazvetsika seo
Yevanhu Mari YeData Kuongorora
Apr 6, 2012 pa 9: 14 PM
Kunze-peji maumbirwo akagadzirwa mazhinji esimba pamberi. Zvino, iwo "mavhoti" atanga tichiedza kutora vatora fomu ye (social) kugovana.
Senguva dzose, ingoita zvinhu zvikuru izvo vanhu vanoda kugovana nemunhu wese. Asi hazvigumiri ipapo. Panofanirwa kuve nechinhu chemunhu pazviri - tora Jason semuenzaniso. Iwe unoda kubatana naye (nekuda kwezvaanoita zvepasirese pasirese zvakare) uye iwe unoda kugovana zvinhu zvikuru zvaagadzira - izvo pakupedzisira zvinotungamira kune imwe mhando yekutendeuka inomubatsira. (kana iwe)
Kutsvaga hakusi kuti kwakafa, matambiro aunoita mukati mechikamu chemitemo yeGoogle.
Apr 6, 2012 pa 11: 07 PM
Zvakanaka! Kutsvaga HAKUFA… ndinobvuma. Asi kugona kuhaya vanhu kuti vatambe system ini zvechokwadi kufa! 🙂
Apr 7, 2012 pa 8: 14 AM
Chinhu chakanaka chinhu chaicho SEO hachisi chekutamba sisitimu
Apr 7, 2012 pa 4: 47 PM
…. Kwenguva refu, yakabvumira backlinkers kubiridzira uye kukunda!
Gumiguru 22, 2012 pa 8:19 AM
Unofanirwa kushandura terminology yako pano Douglas, ko backlinker iri nhema ngowani SEO? Kudzoka kumashure hakuna kushata kwazviri kunokosha. Kushandisa back hat hunyanzvi kubiridzira uye kutamba iyo system. Iyo chaiyo inobudirira SEO inoshingairira zvinongedzo kuburikidza nemaitiro akawanda
Apr 9, 2012 pa 5: 16 AM
Nemablogi angu matatu ari kupuratirwa ne backlinks, ini ndichave ndinofara kwazvo kuona iyi tsika ichibuda mufashoni! Chikafu chikuru, ndezve zvemukati chaizvo pakupedzisira - zvakanaka ndinovimba zvakadaro!
Gumiguru 26, 2012 pa 6:30 AM
Mwedzi minomwe gare gare uye iyo blog spam zvinongedzo zvinoramba zvichiuya! Zvakadaro, iyo hutongi nyowani yakanaka kune vedu vedu vane hanya nezve zvemukati uye vane hanya nezve yakanakira mhedzisiro inodzoka kubva kuGoogle kutsvaga
Apr 9, 2012 pa 5: 48 AM
Kutsvaga hakuna kufa zvechokwadi, asi kwakashanduka nekuwedzera kushandiswa kwenzvimbo dzekudyidzana. Twitter inoshandiswa seinjini yekutsvaga yekupedzisira. 🙂
Apr 9, 2012 pa 10: 51 AM
Google inoda zvinoda vashandisi vayo. Nekudaro, iwe haudi kukwidziridza zvakanyanya kune iwo mainjini ekutsvaga sezvaunoitira kune ako tarisiro vateereri. Gadzira zvemukati zvemukati izvo iwe zvaunoziva tarisa vateereri nhengo zvichabatsirwa nazvo.
Apr 10, 2012 pa 1: 04 PM
Ndingafarire kuona vanhu vachiburitsa zvidzidzo zvinonyatsoratidza "causation" pakati pechinzvimbo chepamusoro nekugovana munharaunda. Kazhinji kazhinji ichi ichiri chiratidzo chisina kusimba. Kugovana pasocial kunotungamira kune zvakawanda zvimwe zvakanaka zvinhu sekushanya, pamwe zvechipiri zvinongedzo semhedzisiro yemaziso ezvakawanda nezvimwe etc. Asi seyadhi yekumisikidza vega, ini handina kuona chero huru fundo yekuti vanokanganisa sei mhedzisiro mukutsvaga nzira. Hapana mubvunzo kuti pakupedzisira.
Zvakare, zvine nharo chaizvo kana tikangotanga kukanda zvinhu zvitsva muchidimbu SEO. Zvinoreva "Kutsvaga Injini Kugonesa". Shanduko inoitika pane saiti uye haina chekuita nekugadzirisa peji reinjini dzekutsvaga. Handisi kuti izvi hazvina kukosha kumakambani. Asi ini ndinoona zvisingaverengeki zvirevo zvichingobvambura zvinhu zvitsva mune izvo zvinoreva SEO, kunyangwe paine musoro.
Muchidimbu ini ndinobvumirana zvachose nemanzwiro edhisheni yemasiraidhi asi ini handibvumirane ne "back link… haichazokanganisa bhizinesi rako sekunyora zvakanyanya zvemukati". Izvi zvinoenderana nezvinhu zvakawanda, chokwadi ndechekuti iwe unoda zvese, mumwe anofanirwa kutyaira mumwe.
Aug 2, 2012 na8: 22 PM
wakangwara *******. Iko hakuna chinokonzera, chaizvo. Mhando yepamusoro yemitezo ine zvakawanda zvinofarirwa neFacebook nekuti vanowana traffic yakawanda, uye vangangove mhando yepamusoro kutanga nayo (zvinhu zvinoshandura kuenda kuhunhu zvakare zvinoshandura kune yakakwira yekutsvaga chinzvimbo). Ehezve epamusoro akaverengerwa mhedzisiro yemakwikwi kukwikwidza ane zviito zveruzhinji, asi iwo haana kuverengerwa kumusoro nekuda kwezviito zvemagariro - vane zviito zvehukama zvakawanda nekuti vanoverengerwa kumusoro. Ndakaedza izvi kusvika pakufa muzvikamu zvinoverengeka, HAPANA CHINOKONZESA - uye ndinoda kukuhaya kuti uwane guesy post brat.
Aug 2, 2012 na8: 48 PM
Chipikiri pamusoro - unobvumirana newe zvachose.
Sep 17, 2012 na12: 37 PM
@searchbrat: disqus @etelligence: disqus @ twitter-15353560: disqus Google yakasimbisa mu2010 kuti zvemagariro zvakashandiswa kusarudza masimba ekumisikidza muvhidhiyo iyi: http://www.youtube.com/watch?v=ofhwPC-5Ub4
Dzazvino algorithm shanduko inoramba ichiisa pachayo zvakanyanya. Branded3 akaita bvunzo yakapusa achishandisa Twitter Retweets. http://www.branded3.com/tweets-vs-rankings
Kune zvimwe zvakawanikwa pano: http://liesdamnedliesstatistics.com/2012/06/social-media-shares-indicate-a-high-google-ranking.html
Uye ini handibvumirane nemoyo wese newe pa backlinking. Zvirongwa zvekudzosera kumashure zvinosvibisa iyo webhu uye zvinokanda mapeji mashoma kumusoro. Google ikozvino yambiro yewebhumasters mukati meWebmaster Zvishandiso kana backlinks ichiita kunge isiri yechisikigo. Kana vasati vatove, vanenge vachikanganisa masosi ako zvisizvo. Nzira yakanakisa yekugadzira backlinks ndeyokuburitsa zvemukati zvinozvigadzira zvakasikwa… kwete kuenda kunze nekuvamanikidza. Kana iwe uri kuitira izvozvo kune vatengi, iwe uri kutyora Mitemo yeGoogle yeKushandira uye ichadzoka kuzotambudza mutengi wako.
Gumiguru 22, 2012 pa 8:12 AM
Pane musiyano uripo pakati pe backlinking (nhema ngowani matekiniki) uye solid solid-yekuvaka nzira. Iwe haugone kuti backlinking yakaipa uye haichaverenge sezvakawanda futi. Iwe unofanirwa kuve wakanangana. Kuudza vaverengi vako kuti backlinking yakaipa haina kujeka uye inogona kutsausa. Google iri kunongedza spammy zvinongedzo uye kwete zvemhando zvinongedzo. Saka kutenga yakaderera mhando zvinongedzo yakaipa nzira asi iwe unonyatsoda kuwana zvinongedzo !! Chero bedzi paine injini dzekutsvaga pachave neKutsvaga Injini Kugonesa. Iwo maitiro uye marongero anogona kuchinja asi izvi hazvireve kuti wafa!
Mar 28, 2013 pa 12: 25 AM
edza zvakare, mhashu, backlinking haisi nhema ngowani maitiro. zvirinani kusaudza chero munhu zvaunoita seo.
Mar 28, 2013 pa 8: 04 AM
Iyo yakasarudzika backlink haina, yakabhadharwa backlink iri. Kana iwe uri kubhadharwa kune backlink, uri nhema ngowani. Uye isu hatiudze vanhu isu kuti "ita SEO", tinovaudza kuti tinowana mhedzisiro yebhizimusi uye zvinogona kubatsira kugadzirisa matambudziko akaunzwa nevanoona nezveSEO anovaisa munjodzi.
Apr 10, 2012 pa 2: 36 PM
Ndakaverenga zvisingaverengeke mablogiki achizivisa kushanda kwemukati. Zvemukati, zvemukati, zvemukati !!! Ndichiri kubvuma, ndinoda kuona chinyorwa chinonyatsoputsa nzira idzo vatengesi vanogona kupa vatengi vavo ruzivo runonakidza UYE kuvadhonza kuti vatarise webhusaiti yekambani.
Kana zvemukati zvakakosha, unotsanangura sei zvemukati "zvakanaka"?
Apr 10, 2012 pa 6: 45 PM
Rakareruka kwandiri. Zvemukati zvemukati zvirimo zvinotyaira vashanyi kuti vaite izvo zvauri kuvakumbira kuti vaite. Kune imwe kambani, izvo zvinogona kuve zvakasiyana. Kune mamwe makambani, mavhidhiyo mapfupi. Kune vamwe, yakareba kopi. Ndosaka zvichikosha kuti umise analytics nemazvo uye kodhi zviitiko zvako zvese nemishandirapamwe. Edza zvese ... ita, bvunzo, chiyero, natsa uye dzokorora.
Apr 12, 2012 pa 6: 24 AM
Chaizvoizvo. Zvemukati ndiMambo! Iye zvino kupfuura nakare kose. Kana iwe uine zvakasarudzika zvemukati, yako saiti inokwezva vashanyi uye zvinongedzo pasina chero SEO-Campaign. Ingove wakasiyana uye nyora zvinodzidzisa uye zvechokwadi zvakasarudzika zvemukati.
Apr 16, 2012 pa 8: 08 AM
Panzvimbo yekutevera mazwi akakosha, mumwe anofanirwa kunge achinyorera vanhu nekuti kumagumo Injini dzekutsvaga dzinotevera vanhu kwete mazwi akakosha.
Jul 22, 2012 na2: 51 PM
ipa misi pazvinyorwa zvako murume. sheesh
Sep 2, 2012 pa 5: 30 AM
Anotyisa post. Ndatenda nekugovana kwako kwakanaka.
Sep 11, 2012 pa 6: 53 AM
Kuve munyori, ndinotenda chaizvo danho reGoogle asi kana ndikafunga kubva mumaonero eCo, SEO haisi chinhu chakaipa futi ..
Sep 19, 2012 pa 4: 26 AM
Zvemukati zvaunogadzira zvekuratidzira midhiya yemagariro sechiratidzo hachisisina basa kunze kwekunge zvine chekuita nezvevateereri vako. Iwe unogona kutaura chero chaunoda sewekushambadzira vezvenhau mushambadzi asi kunze kwekunge vanhu vafarira kuteerera kune zvauri kutaura iwe unenge usina basa chena-ruzha rwunoenda rwusingazivikanwe pamutambo wecocktail- uye ngatitarisane nazvo, Facebook ndiyo yekupedzisira cocktail pati, uine kana usina doro.
Dambudziko nderekuti "nyanzvi" dzakawanda dzezvemagariro evanhu dziri kudzokorora zvisina musoro zvakatotaurwa nemumwe munhu akanyatsofunga nezvezvavari kuzotaura vasati vangozvitaura, kana kana nepadiki pacho anofunga kumberi kwenyaya yekuburitswa iri kwese kwese uye pamhepo midhiya enhema. Aya ndiwo anokudzwa mabloggi pane akanakisa, kana vasingabhadharwe zvemukati curators kuyedza kuita isingabhadharwe kurarama nekuteedzera nekunamatira zvemumwe munhu zvemukati.
Sep 22, 2012 pa 2: 47 AM
SEO inopfuura kungori SPAM. Zvisungo zvakakosha izvozvi uye mune ramangwana, asi kune zvakakwirira zvinodiwa zvehunhu.
Mar 28, 2013 pa 12: 27 AM
mazhinji ma link anongove spam.
Sep 28, 2012 pa 2: 37 AM
Nyora zvakanaka, Douglas! Pakutanga ini ndaida kubvarura iwe nyowani yekutaura SEO yafa! ASI ndakaverenga iyo yese posvo uye zvikuru kwazvo ndinobvumirana newe! Kudos!
Gumiguru 1, 2012 pa 8:51 AM
SEO haina kufa. Ini handibvume. Ino inguva yekungochinja marongero. Ndizvo.
Gumiguru 6, 2012 pa 4:59 AM
Zvakanakisa zvemukati, SEO haina kufa mushure mezvose 🙂
Gumiguru 12, 2012 pa 5:45 AM
SEO haina kufa - yayo shanduka uye ichiri kuchinja! Nice link bait 😉
Gumiguru 15, 2012 pa 5:20 AM
Gumiguru 19, 2012 pa 3:33 AM
Ini ndinobvuma kuti kune injini dzekutsvaga senge Google "Zvemukati ndimambo" asi zvakadaro zvakanaka zvinongedzo zvinhu zvechinzvimbo.
Gumiguru 23, 2012 pa 6:55 AM
SEO Yakafa .. imwe isingazivikanwe blogger… zvinosuruvarisa ..
Gumiguru 23, 2012 na12: 15 PM
Ini handisi clueless blogger Steve. Sangano rangu riri kubudirira apo avo vanonzi "SEO Agency" vari kufa uye isu tiri kutora vese avo asingatarisirwe vatengi.
Nov 6, 2012 pa3: 34AM
LOL: Ini ndinofunga SEO ingori mukoma mushure mechiitiko ichi munzira yemahara.Uye ndinobvumirana neavo vekare kufa vanhu vakaomarara vanodzokorodza "zvemukati ndimambo" futi. Google, chero yakadai kambani, inosungirwa "kuyedza" ichisundira hamvuropu.
Nov 20, 2012 pa5: 05AM
Yese inobvumirana Douglas, asi dzimwe nguva zvakare google funga nezviri mukati. ita shuwa izvo zvawaida kutsikisa zvitsva kana zvakasarudzika chero nzira.
Jun 15, 2013 pa4: 11AM
Zvakanaka kutumira. Asi SEO
haina kufa. Zvakare zvakanaka zvinongedzo zvichiri kukosha kune chinzvimbo.
Jun 18, 2013 pa 9: 50 PM
Sep 23, 2013 pa 1: 59 AM
Iyo itsva SEO, mumatanho mashanu:
1. Gadzira chinyorwa chine musoro unonyengera asi unotora pfungwa.
2. Nyora blog chinyorwa nezvishoma zvirimo zvemukati.
3. Mushandisi weBombard ane nzira dzakawanda dzekugovana zvakataurwa.
4. Taura nezve kusabatsira kwema link pane peji rakazara nehukama.
5. Unganidza mari yaunotambira.
Sep 23, 2013 pa 10: 32 AM
Muripo wangu uripi? 🙂
Mbudzi 22, 2013 na2: 55 PM
NDATENDA nekunyora izvi. Ndiri kurwara uye ndaneta nezvinotaurwa nevanyanzvi veSEO.
Dec 5, 2013 pa 1: 25 AM
Chinyorwa ichi chakandikurudzira ini ndanga ndisingade kuGoogle SEO kuti ndione kuti chaive chii. Ini ndakakwanisa kuona zvese zvandaida kuziva: chidimbu chinoedza kwazvo kubata asi hachizomboiti.
Dec 9, 2013 pa 1: 52 AM
Bahahaha izvi zvinonakidza. Rinondiyeuchidza nezvechinyorwa Pesach Lattin akaita chinguva achidzoka. Fembera chii?!! Zvemukati Kushambadzira ndeye SEO !! Kuchinja mitemo hakuchinje mutambo. Inonzi shanduko. Tichiri kutamba Basketball kuno.
Gumiguru 22, 2015 na4: 24 PM
yup, yakafa. Chimwe chinyorwa chikuru pano kuchitsanangura. Dzekutsvaga injini ndidzo nyonganiso uye pavanonyanya kuchinja zvinhu (algorithms nezvimwewo) iyo messier yainowana. Zvemagariro midhiya zvinosarudza izvo mushandisi zvinogadzira zvemukati zvavanoda, zvakanyanya zvakanyanya. Injini dzekutsvaga dzinosanganisirwa muFacebook ne twitter, saka nei uchida Google? Unogona kuwana chero kambani neruzivo zvaunoda pasocial media.
Jun 1, 2016 pa3: 22AM
Kutenda nekugovana..Asi ikozvino nyonganiso iri pano, mumwe munhu anoti SEO haina kufa uye mumwe munhu anoti SEO yafa. Ndeipi sarudzo chaiyo.
Jun 1, 2016 pa11: 00AM
SEO ikozvino yasanganisira uye inoda hunyanzvi pamasvikiro. Mazhinji akachena SEO mafemu isu tinoziva aenda pasi, zvasara ma agency anonzwisisa iwo muhombe mufananidzo uye vanonzwisisa maitiro ekuvandudza zvemukati zvemukati, zvemagariro, nhare, uye maPR mazano - kuyedza kuyedza kune ese masvikiro.
Gumiguru 17, 2016 pa 8:02 AM
Pamwechete ndinobvumirana nepfungwa yemanzwiro, asi kanganwa "SEO yakafa" uye funga pane zvimwe nezve "SEO yakashanduka." Zvirokwazvo iwe olde SEO (matani ezwi rakakosheswa backlinks, uye / kana kiyi kiyi yekuisa onsite) yakafa seye gonhi, asi ini ndinofunga zvakanaka kupokana kuti ZVAKANAKA SEO (zvinopesana neruzhinji SEO) iri chaizvo UXO nerimwe zita.
Izvo zvese ndezve kukwidziridza ruzivo rwemushandisi kubva pekutanga kubata zvichienda mberi (uye zvirokwazvo hazvingoperera pakutendeuka kana kubata kana "kuisa chinangwa pano" sevanhu vazhinji vanoita kunge vachifunga), uye nepo izvi zvichigona uye zvichisanganisira zvimwe zvekufunga senge markup uye commonsense "optimization" yakawanda yeiyo zvakare inodonha kune yakanaka, inowanikwa webhu inovaka uye ingori yakajeka yekare pfungwa.
Dambudziko mumaonero angu nderekuti vanhu vakawandisa vanofunga nezveSEO musilo sechinhu chaunoita uri wega - nepo, chaizvo, kana uri kuzviita nemazvo, SEO chimwe chinhu chaunoita zvakasununguka paunenge uchienda pamwe nebhizinesi senguva dzose Yako webhusaiti. Iko kunofanirwa kufungidzirwa kushoma se "kushambadzira" chiitiko uye zvakanyanya se "hutsanana" imwe, sekutarisa kuperetera!